Sababaha Kalsooni Darrada Iyo Talooyin Kaa Dhigaya Qof Hanta Kalsoonida Naftiisa - Daryeel Magazine
Sababaha Kalsooni Darrada Iyo Talooyin Kaa Dhigaya Qof Hanta Kalsoonida Naftiisa
Illahay ayaa mahad leh isurto galiyey in an maqaalkan qoro . Maqaalkan ayaanu idinkusoo gudbin doonaa talooyin muhiima iyo talaabooyin kuu suurto gelinya kasbashada kalsoonida naftaada.
Ugu horeyn waa maxaay kalsoonida:
In aad naftaada ku kalsoonaato ma aha wax lagu micneyn karo in aad isla weyntahay ama aad isla qabweyntahay. In aad isku kalsoontahay waa muujinta iyo ku dhiiranaanta soo bandhigidda fikradaha maankaaga ku keydsan, addiga oo huba arimaha aad ka hadal is leedahay asal ahaantood iyo guud ahaantoodaba.
Kalsoonida nafta waxa ay kugu dhiirrigalisaa in aad soo bandhigto fikirkaaga, wadaagnna aad galin karto, talo wadaag kolkii ay noqotana aad talada tii saxda ah ee waddarta guud ay isku raacaan in aaddan ka biyo diidin. Waa maxay kalsoni daradu:
1. in uu qofku naftiisa ka dhaadhiciyo kolka horeba,in anu waxba qaban karin .
2. in uu iska dhadhiciyo , in u yahay qof liita oo an dadka la janqadi Karin.
3. In uu noqdo qofka baqa so bandhigaa fikirkisa
4. In u ka baqo ka jawaabista su,aalaha uu garanyo
5. In uu hamigisa ka tana suulo, isga oo ka baqanaya guul daro ku timada.
6. Wuxu ka baqa guusha , iyo in u meel sare gadho.
Qofku sidee ayuu kalsoni u amuran kara maxase laga bahanyahay in uu sameyo.
Qodobadan ayaa laga yaba in ay ku cawiso insha allah:
1. Qofku in uu unoqdo Allehii Abuuray isna waydiiyo maxaa laguu abuuray FAA’IDO MISE KHASAARE U JOOG.waa in uu Alle ku xidhnaadaa oo uuna ka caajisin wanaaga Alle faray xumaantan ka dheeraadaa.
2.Raja sami ku noolow wakhti kasta wanaag ku muuji wax kastoo ka dhaca hareerahaaga, iyo hiigsihaga nololeed.
3. Waa in uu qofku runta isku sheegaa oo kabaxaa khiyaaliga uu tusaayo Nafta run ka sheeg ujeedooyinka aad u nooshahay iyo wax qabdkiisa nolol maalmeed.
4. Ku kal soonow wax aad samayso si Dareen fiican aad ugu lahaatid isbadalka hab dhaqanka noloshaada ama samayndoonto.
5. Naftaada Bar sida loo dheho (maya iyo haa), wixii aadan niyad ama waqti u hayn.kana dhaadhici oo ha is odhan dadku way ku nici taasi waa haaa iyo may, waxay dadka tusayasaa in dadku ku fahmaan oo la ogaankaro qof oran kara erayga MAY iyo haa.
6. Fikradahaaga iyo wax qabadkaaga cadee oo tusdadka kana dhaadhici ama iibgee oo ismuuji in aad tahay qof lagu xisaabtamaayo oo la dareemi karo marka aad maqantahay iyo marka aad joogtidba
7. Ahow qof nool muuji dareenkaaga dhegeyso,jirka ka hadal,aamus,tilmaan,ilmay,qosol. intaas oo dhami wax bay kuu sawiri doonaan naftaadan la sheekayso taas macnaheedu wax weeyi maskaxdaada kaasho adigoo dagan.
8. Nafta ha mashquulin oo dadku wax ay kaasheegaan haku mashquulin sababtoo ah wakhti ayaad iska luminaysaa kana faa’idaysi wakhtiga aad haysto mar uuna ku soomarayn ayaa imanaysa.
9: Qof isku kalson oo an fikirda dadka , Balse is barbar dhig samee qiimayn si ay kuu tusto in kaagu kafiican yahay ama kani kaafiican yahay oo aad fikir kale oo fiican raadisaa.dhiibona firikaaga kulamada aad ka qayb gasho ama marka aad la joogtid asxaabtaadad.
10.Ku dadaal in aad naftaada Qanciso, raalina noqo xasiloonidana ilaali noloshaadana wanaaji oo ku dadaal sidii aad qayrkaa wax uula qabysan lahayd
1. raadi isbedel joogta ah, addunkan ma jiro qof dhamaystiran oo aan lahayn dhaliil ama ceeb dhamasytirku ilaahay keliya ayay u sugnaatay , haddi lagu dhaliilo ama laguu sheego ceeb aad leedahay tusaale ahaa ku degdega go’aamada waxa kugu waajiba inaad bedesho hab dhaqankaa kana takhlustid .
2.Kalsonida naftadu waxay ka qayb qaadata hormarka qofka ,markasta oo aad isku aragto dhaliil isku day inaad si dhakhso ah u baabiisid
3. Akhris ka Qur,aan badi iyo buugaag aad wax badan ka fa,iidaysid: haddaad jeceshahay inaad kordhiso kalsoonida naftaada isku day inaad akhrido buugaag badan gaar ahaan kuwa ka sheekeeya toosnanta qofka ,wacdiga diiniga,iyo horumarinta qofka . shaki kuma jiro in akhrinta buugaagta ay saameyn taban ku leedahay kalsoonida qofka , fadlan iska ilaalli inaad akhrido buugaagta ay ku qoranyihiin sheekooyinka khiyaaliga ah kuwaas oo kugu reebi kara xasuuso xun xun iyo warweer.
4. naftaada kalsoni u muji: odhaahaha aad naftaada ku tidhaahdid waxay saameeyaan kalsoonida naftaada tusaale ahaan haddaad ku fashilanto inaad ku guuldareysato howl ama aad imtixaan hooseyso keentid ama aad meel sare aad gaadhi waydo ,waxa hubaala inaad naftaada kula hadasho ereyo niyad jab ah “waan guuldereystey ” , “mar dambe iskuma dayi doono “, “derejadaa ma gaadhi karo ” iyo qaar kale .
hadaladani waxay saameyn togan ku yeeshan qofka iyo kartidiisa hadaba waxa kugu waajiba inaad naftaada mar walba dhiirigeliso ,dhinaca wanaagsana aad kula hadasho “haa waan awoodaa ” ,”waan gaadhi karaa derejedaa aan rabo “, hadaan mar guul dereysto mar dambe ma guuldereysan doontid ” kelmadahani waxay kordhinayaan awooda nafsiyadeed ee kugu kaydsan iyo kalsoonida naftaada ee aad haysatid
waxan rajaynaya in aad maqalkan wax badan ka fa,iiday
dhirigalina ku noqday akhriste waad mahadsantahay.
Wixi talo iyo tusale ah halkan ayad ku so hagajin karta
W/Q: hinda cabdi sheikh
10 Qodob Oo Kaa Dhigaya Qof Naftiisa Ka Adag, Noloshiisa Hanan Kara Si Wanaagsanna U Fikiraya 9 Tallaabo Oo Si Cajiib Ah U Dhisaya Kalsoonida Naftaada Talooyin Kaa Caawinaya In Battery-ga Laptop-kaaga In Mudo Ah Ku Hayo